क्यान्सर अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने योजना:डा आचार्य - Sidha News
क्यान्सर अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने योजना:डा आचार्य
चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले स्थापनाको २० औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ। यो अवसरमा अस्पतालले विशेष कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा स्वास्थ्यखबरले अस्पतालको विकास, समस्या, चुनौती र भावि योजना लगायतका विषयमा कार्यकारी निर्देशक डा विजयचन्द्र आचार्यसँग कुराकानी गरेको छ:
अस्पताल स्थापनाको २० औं वार्षिकोत्स मनाइरहनु भएको छ। अस्पतालको यहाँसम्मको यात्राका विषयमा छोटकारीमा बताइदिनुहोस् न।
असोज १० गतेबाट अस्पताल १९ बर्ष पुरा गरी २० औंं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। विगत १९ वर्षको अवधिमा अस्पतालले थुप्रै आरोह अवरोह पार गर्दै आज सहज अवस्था तर्फ उन्मूख भइरहेको छ। यसका लागि अस्पताल संचालक समितिका पदाधिकारी, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका सम्पूर्ण प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी, तथा अस्पताललाई माया गर्ने सरोकारवालाहरु सबैको साथ र सहयोग छ।
२०४८ साल चैत्रमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण गर्दा तत्कालिन चिनियां प्रधानमन्त्री लि फङ्गबीच द्धिपक्षिय सहयोग अन्र्तगत नेपालमा क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्ने समझादारी भएको थियो। सोही समझदारी अनुसार यो अस्पताल स्थापना भएको हो। स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा अस्पतालले लाखौंलाई सेवा दिएको छ। क्यान्सरका बिरामीका लागि यो अस्पताल अहिले भरोसाको केन्द्रका रुपमा चिनिएको छ। अस्पताललाई स्थापनाकालदेखि नै चीन सरकारले निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ।
क्यान्सर सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान र क्यान्सर विरामीहरुको रोगको परीक्षण, निदान र उपचार एवं रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न यो अस्पताल स्थापना भएको हो। त्यही अनुरुप काम पनि अगाडि बढीरहेको छ। अस्पतालको सेवाबारे अस्पताल प्रशासन सधैं चनाखो भई कार्यहरु सञ्चालन गरिएका छन्। अस्पतालका विषयमा विगतमा भएका नकारात्मकताको सन्दर्भबाट आज सकारात्मकताको उज्यालोमा गइरहेको छ। यो हामी सबैको टिमवर्कका कारण नै सफल भएको हो।
अस्पतालको सेवा विस्तार तर्फ के-के काम भइरहेको छ?
अस्पतालको निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेर आएदेखि नै म यो अस्पतालका विकास र विस्तारमा निरन्तर लागिरहेको छु। साढे दुई वर्षको यो अवधिमा अस्पतालको सेवा विस्तारमा धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन्। अस्पतालका नियमित सेवाहरु मेडिकल, सर्जिकल, रेडियोथेरापी, रेडियोडायग्नोसिस, न्युक्लियर मेडिसिन, प्याथोलोजी र क्यान्सर रोग रोकथाम तथा अनुसन्धान एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादन अन्र्तगत अंकोलोजी विषयमा स्नातक अध्ययनको नर्सि¨ कलेजको स्थापना र सञ्चालन जस्ता महत्वपुर्ण सेवाहरुको प्रारम्भ भएको छ।
अस्पतालको सेवा विस्तार अन्र्तगत नयाँ भवन निर्माण परियोजना २०६८।६९ को आथिर्क वर्षमा प्रारम्भ भए पनि ३३ महीनामा सम्पन्न हुने भनिएको सो परियोजना रुग्ण रुपमा रहेको थियो। भवन निर्माणका लागि तोकिएको समयको ३ बर्ष पछि मात्र विगत बर्षको अनवरत प्रयास र कसरत पछिमात्र यो परियोजनाको निर्माण सम्पन्नता गरि गत बर्ष उद्घाटन गरिएको थियो र यसको पुर्णक्षमतामा सञ्चालन यसै बर्षमात्र गरियो। यस भवन निर्माण पछि ११ वटा वार्डको व्यवस्थित शय्या विस्तारका साथै भौतिक संरचनागत व्यवस्थितीकरण गरिएको छ। क्यान्सर विरामीको केमोथेरापी उपचारमा शय्या अभावको कारण उपचारमा लाग्ने लामो प्रतिक्षा सुचिलाई समाधान गरिएको छ। हाल अस्पताल ४५० शय्यामा विस्तार भएको छ।
अस्पतालको रेडियोडायग्नोसिस र न्यूक्लियर मेडिसिन तर्फ एमआरआइ, सिटी स्क्यान, मेमोग्राम, ग्रामा क्यामेर लगायतका सेवा चुस्तदुरुस्त बनाइएको छ। रेडियोथेरापीको सेवालाई गुणात्मक र संख्यात्मक रुपमा अत्याधुनिकीकरण गरिएको छ। गत बर्षमात्र नेपालमा नै पहिलोपटक भित्रयाइएका लिन्याक र अंको सिटी स्क्यान मेसिन र शरिरको भित्रीभागमा भएको क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने ब्राकीथेरापी मेसिनका सेवा पक्कै गर्व गर्न लायक छन्।
अस्पतालको प्याथोलोजी तर्फको सेवामा विगतमा प्रश्न उठ्दै आइरहेको थियो। अहिलेको अवस्था के छ?
हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको नै बिरामी हो। बिरामीले सहज रुपमा सेवा पाउनु पर्छ भनेर नै हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौं। विगतमा केही समस्या थिए। हामीले ती सबै समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढेका छौं। बिरामीको आवश्यकतालाई महशुस गरि प्रत्येक २ घण्टामा बिरामीको रगत जाँचको रिपोर्ट आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। इमरजेन्सी ल्याव सेवा समेत प्रारम्भ गरिएको छ। र आगामी बर्ष मोलिक्युलर ल्याबरोटरीको स्थापना गर्न प्रकृया अघि बढाइएको छ। प्याथोलोजीमा हाल बायोस्पी रिपोर्ट आउन केही प्रतिक्षा सुचि रहेको छ। त्यस समयलाई घटाई आगामी केही महिना भित्रमा १५ दिनमा उक्त रिपोर्ट आउने व्यवस्था मिलाइने छ। अस्पतालको प्याथोलोजिको सेवामा आधुनिकीकरण गर्दै नयाँ मेसिनबाट हिस्टोलोजी सेवा, प्लेटलेट फेरेसिस, साइटोलोजी, फ्लोसाइटोमेटिक, इम्युनोकेमेष्टि लगायतका महत्वपुर्ण सेवाहरु सञ्चालनमा छन्।
अस्पतालमा विगतमा नभएका सेवाहरु थप गरिएको खबर बाहिर आइरहेको थियो, के-के नयाँ सेवा थपिएको हो?
अस्पतालमा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा धेरै नयाँ सेवाहरु विस्तार भएका छन्। बिरामीलाई सहज रुपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न हामीले साना, ठूला सेवाहरु विस्तार गरेका हौँ। रक्त क्यान्सरका बिरामीलाई आधुनिक स्तरको सेवा दिन आवश्यक ठानी यसै बर्षबाट हेमाटो अंकोलोजी वार्ड प्रारम्भ गरिएकोछ। अस्पतालमा हालसम्म नरहेको जेनरल क्याबिन, भिभिआइपी क्याबिन र भिआइवी क्याबिनको सुविधा समेत गरी १३ शय्याबाट सेवा सुरु गरेका छौं। अस्पतालमा आजसम्म नरहेको आइसियुको सेवा पनि यसै बर्ष सुरु गरिएको छ। यसै गरि अव केही दिनम हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट र आधुनिक पोष्टअप सेवा सञ्चालन गरिने छ।
अस्पताल स्थापनादेखि सञ्चालनमा रहेको मेजर शल्यक्रिया कक्ष ४ र माइनर १ वटा गरि ५ वटामात्र शल्यक्रिया कक्षबाट सेवा प्रवाह भएको छ। आज भन्दा १९ बर्ष अघि स्थापना भएका शल्यक्रिया कक्षमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले शल्यक्रियामा प्रविधिका हिसावले केही कम्प्रमाइज गर्नु परेको अवस्था छ। क्यान्सर रोगको उपचारमा महत्वपुर्ण मानिने शल्यक्रिया प्रविधिलाई अत्याधुनिकीकरण गर्न गत बर्षको योजना अनुसार नेपाल सरकारसंग बजेट माग गरिएको र सो अनुसार सहयोग प्राप्त भएकोले ८ वटा अत्याधुनिक प्रविधि मैत्री मोडुलर शल्यक्रिया कक्षको निर्माण सम्पन्नताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जुन सेवा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पतालहरुमध्ये उत्कृष्ट शल्यक्रिया कक्षबाट सेवा दिने पहिलो अस्पताल हुनेछ।
अस्पतालमा फार्मेसीको अवस्था कस्तो छ?
अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्ने कुरा निकै चुनौतीको विषय थियो। तर निरन्तरको मिहेनत र टिमको सहयोगका कारण गत असार १० गतेबाट हामीले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न सफल भएका छौं। उक्त फार्मेसीको औपचारिक उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको हो। हाल फार्मेसिबाट क्यान्सर रोगको उपचारको लागि आवश्यक औषधिहरु सस्तो र सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराइएको छ। बजारमा पाइने मुल्य भन्दा निकै सस्तोमा यहाँ औषधि पाइन्छ। उदाहरणका लागि ४५ हजार पर्ने केमोथेरापीलाई २१ हजारमा अस्पताल फार्मेसिबाट उपलब्ध गराइएको छ। क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधि ८७ किसिमका र अन्य सर्जिकल र अन्य औषधी गरि हाल फार्मेसिमा ११ सय प्रकारका औषधि र औषधिजन्य समान उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ सस्तोमा औषधि उपलब्ध हुने भएपछि यस विरुद्ध बाहिर केही गतिविधी समेत हुन थालेको छ। तर, हामी त्यसविरुद्ध चनाखो भइ काम अगाडि बढाइरहेका छौं।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा अस्पतालले केही नयाँ सेवा सुरु गर्दै छ कि?
अस्पतालले निरन्तर सेवा विस्तार गर्दै गएका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप ह्वात्तै बढीरहेको छ। हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र सेवा प्रवाह सहज बनाउन जनशक्ति लगायतका अन्य सेवा पनि थपिरहेका छौं। सरकारको स्वामित्वको एकमात्र क्यान्सर अस्पताल भएका कारण यहाँ देशभरबाट बिरामी आउने गरेका छन्। त्यसकारण हामीले बिरामीको सहजताका लागि वार्षिकोत्सवका अवसरमा नयाँ सेवा सञ्चालनको घोषणा भने गर्ने छौं। लामो अध्ययन, अवलोकन र विश्लेषणबाट अस्पताल सञ्चालक समितिको मिति २०७६ भाद्र २९ गतेको बैठकले अस्पतालको विस्तारित स्वास्थ्य सेवा कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरि अस्पतालमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा लागु गरिने छ। यसबाट बिरामीले अस्पताल समयपछि ३ घण्टा वेलुका ४ः३० बजेबाट ७ः३० वजे सम्म अस्पतालबाट जुन सुकै प्रकारको विशेषज्ञ सेवा लिन पाउने छन्। यो सेवा मंसिर १ गतेबाट सुरु हुनेछ। तर, घोषणा भने आज वार्षिकोत्सवको दिन हुने औपचारिक कार्यक्रममा गर्नेछौं।
अस्पतालको सेवा प्रवाह र विकासमा चुनौतीहरु के-के छन्?
अस्पतालको इतिहासमा पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई नियुक्तिको अवसर मलाई मिलेको थियो। नियुक्तिका बखत ३ बर्षको कार्यकालको लागि छनौट हुँदा म अस्पताल सञ्चालक समिति समक्ष करार गरि कार्ययोजना पेश गरि आएको थिएँ। सोही अनुसार काम गर्दै गइरहेको छ। अस्पतालको सेवा प्रवाहका सबै विधामा अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर मिल्यो। मैले पेश गरेको कार्ययोजना अनुसार काम गर्न सफल भएको छु । कार्यसम्पादन करारको कार्ययोजना अनुसार अस्पतालको सेवाको अपडेट नियुक्तिको पहिलो वर्ष र स्तरोन्नती दोस्रो बर्ष सम्पन्न हुने उल्लेख भए बमोजिमको समय सिमामा मेल खाएको छ। कार्यमुलक अवस्थामा यो अस्पताल पुग्दै गर्दा विगत देखि हाल सम्म आउदा पनि परिवर्तन र विकास र विस्तारलाई सकारात्मक मनोविज्ञानबाट नहेर्ने प्रवृत्ति भने केही अंशमा रहेको छ। बिरामीको सेवामा समर्पित रहनका लागि सौदा गर्नु सकारात्मक रहला तर व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठाका व्यवहार अवश्य पनि अस्पताल परिवर्तन बिरोधि गतिविधि हो। यहाँ काम गर्ने क्रममा केही व्यक्तिमा मैले त्यस्तो व्यवहार देखेँ। हिजो पदमा रहेर पनि अस्पतालको खस्कदो अवस्थालाई माथि उचो गर्नका लागि पहलु लिन नसक्ने प्रवृत जहीले पनि यस कार्यकालका चुनौती रहे। जिम्मेवारी लिन खोज्नेहरु अस्पताल र बिरामीको सेवा भन्दा नकारात्मक भावबाट अभिप्रेरित भएको तितो यथार्थ छ। केही वरिष्ठ र विशेषज्ञ चिकित्सकहरु बिरामी र अस्पतालको स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुनु पर्नेमा नभएको महशुस भयो। म र मेरो टिम यी चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढीरहेको छ। खुट्टा तान्ने र काम बिगार्न खोज्नेहरुलाई म राम्रो कामबाट नै जवाफ दिइरहेको छु। हाम्रो ज्ञान र सिपको उच्चतम उपयोग बिरामीको सेवामा लगाउनु पर्छ।
अस्पतालमा विशेषत कर्मचारीको सेवा सुविधाका हिसावले निकै मेहनत गरिएको भएता पनि सो अनुसारको प्रतिफलमा पक्कैपनि सकारात्मक सोचको विकास हुनु जरुरी छ। बिरामी मैत्री हँसिलो सेवामा कहीँ कतै कमी भयोकी भन्ने तर्फ पनि मनन गर्नु पर्नेछ र अझ बढी मेहनतको खाचो तर्फ सचेत रहनु पर्ने छ। २इ वर्ष पुरानो अस्पताल भएका कारण मेसिन, औजार उपकरणहरु पुरानो हुनु र नयां मेसि तथा उपकरणहरु समयमानै प्रतिस्थापन गर्न विविध कारणले नसक्नु, दक्ष जनशक्तिको पलायन, बिरामीहरुको कमजोर आर्थिक अवस्था जस्ता विषय नै अस्पताललाई सधै रहने चुनौती हुन्। अस्पतालको सेवा बढ्दै जाने अवस्था एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ अस्पाताल सञ्चालनको लागि प्राप्त अनुदान रकममा समय सापेक्ष वृद्धि हुनु पर्नेमा सो नभई स्वास्थ्यकर कोषबाट उपलब्ध रकम बर्षेनी घट्दो रुपमा छ। आर्थिक बर्ष २०६८/०६९ मा क्यान्सर अस्पताललाई स्वास्थ्यकर कोषबाट प्राप्त रकम रु. ३३ करोड ४६ लाख, आर्थिक बर्ष २०६९/०७० मा २९ करोड ४३ लाख, आर्थिक बर्ष २०७०.०७१ मा २४ करोड ५० लाख, २०७१/०७२ मा २५ करोड ५० लाख मात्र रकम उपलब्ध भएको थियो। गत बर्ष २७ करोड ५० लाख रकम प्राप्त भएबाट आर्थिक बर्ष २०६८/०६९ को तुलनामा गत बर्ष ६ करोड कम रकम प्राप्त हुंदा समस्या परेको छ। वर्तमान अवस्थामा अस्पतालले एका तर्फ सर्वसुलभ उपचार दिनु पर्ने दायित्व छ भने अर्को तिर अस्पताल शुल्क वृद्धि गर्दा विपन्न तथा गरिव जनसमुदायमा आर्थिक भार पर्ने हुदा सरकारबाट नै अनुदान रकममा केही वृद्धि गर्न पर्ने देखिन्छ। अस्पतालको आय बढाउनको लागि बैकल्पिक उपायहरु खोजी गर्नुको साथै स्वास्थ्य करकोषको रकम बृद्धि गरि रेड बुकमा संचालन खर्च बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्छु।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त अस्पताललाई क्यान्सर अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने भन्ने नै हो। यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको छ। प्रतिष्ठान बनाउने बाटो तर्फ लाग्ने क्रममा पहिलो चरणमा ब्याचलर तहमा क्यान्सरका विषयमा नर्सिङ अध्ययन सुरु भएको छ। यो कार्यलाई क्रमश विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ। उपचारात्म सेवा तर्फ अस्पताललाई उत्कृष्ट संस्थाका रुपमा विकास गर्ने योजना छ। क्यान्सरका हरेक उपचार यहीँबाट दिन हामी लागिरहेका छौं। क्यान्सर उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो। यसका लागि सरकारको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ। अहिले तत्कालका लागि हामीले रेडियोथेरापी विभागको सेवालाई अपग्रेड गर्ने सन्दर्भमा थप एक लिनियर एसिलेटररसिटी बेस हेलिकल लिनियर तत्काले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याउन कार्य अगाडि बढाएका छौं। रोवटिक साइबर नाइफ सहितको उपकरण भित्र्याउन कार्यक्रम तय गरिएको छ। न्यूक्लियर मेडिसिन तर्फ राष्ट्रिय चासोका रुपमा धेरै लामो समयदेखि थाती रहेको पेट सिटी स्क्यान मेसिन खरिद परियोजनालाई संञ्चालक समितिको बैठकले आगामी दिनमा अन्तीम टुंगोमा पुर्याउने छ। इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणाली सुरु गर्ने लगायतका थुप्रै योजनाहरु बनाइएको छ।